San Francisco: yakajeka font shanduko pawebhusaiti yepamutemo yeApple | Ndinobva mac
San Francisco: yakajeka font shanduko pawebhusaiti yepamutemo yeApple
Haisi nhau dzekuti vakomana vanoshanda mazuva ese muCupertino havasiye kana chidiki diki mukana. Saka isu tinogona kutarisa nenhau dzatinokuunzira nhasi: Apple inotora font nyowani, ino nguva imwe yakasikwa yakanangana navo uye yavo, pane yavo yepamutemo webhusaiti ye www.apple.com, akadanwa San Francisco.
Kubva nhasi, isu tinogona kuona kuti iyo typography yeiyo kambani peji inogadziriswazve zvachose. Iyo nyowani tsime modhi yakatanga muna 2015 padivi peApple Watch. Asi zviri kubva nhasi, pazvinoonekwa pane ese epamutemo Apple mawebhusaiti.
Fonti yekare, Zviuru, yakatsiviwa zvachose uye ikozvino San Francisco zvinoita kuti zvive nyore kuverenga, zvichiita kuti zvinyorwa zvive neushingi uye zvakapusa. San Francisco yanga ichimhanya paIOS neMacOS kubvira iOS 9 uye OS X 10.11, muna 2015.
Isu tingatsanangure sei iyi typeface? Zvakanaka ndezve mukomana sans-serif yakaderedzwa, yakafanana ne Helvetica. Yakagadzirwa zvakananga kune zvidiki zvidiki, senge iyo Apple Watch, iine imwe nzvimbo pakati petsamba imwe neimwe kuti zvive nyore kuverenga uye kuverenga. Nekudaro, inoshandawo zvakakwana pamatafura makuru eretina nekuda kwekugadzirwa kwayo kwakachena.
San Francisco Ndiyo yekutanga font iyo Apple yakagadzira kwemakore mazhinji. Mumakore makumi masere, zvaive zvakajairika kuona kambani yekuNorth America ichigadzira mafonti matsva uye achiaisa pane avo michina. Nekudaro, kubva kuma80s, Apple yakasiya mabasa aya, ichiwana mafonti akagadzirwa kare ekushandisa nekuvandudza iwo maitiro ekujeka.
Nokudaro, tsime San Francisco ine kukosha kwakakosha. Kune vanoda retro, iyo Apple yakadzorera nhanho dzayo kugadzira mafonti ayo, inongedzo kumatanho akatorwa makore apfuura, uye izvo zvakaita kuti isu tishandure tishandukire kwatave ikozvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » San Francisco: yakajeka font shanduko pawebhusaiti yepamutemo yeApple
Apple inobvumidza vanogadzira kuti vapindure kune ongororo yeapplication eIOS neMac
Yese Vhidhiyo Player, inongowanikwa e0,99 euros chete